Qatar oo Soomaaliya Ka taageeraysa Dhanka Amaanka – Daily Som
Qatar oo Soomaaliya Ka taageeraysa Dhanka Amaanka
By Staff on May 10, 2018 No Comment
Wasaarada Arimaha Dibada Boqortooyada Qatar ayaa sheegtay in ay soomaaliya ka taageerayso dhanka Amaanka iyada oo sidoo kale Cambaaraysay qarax dad badan ku dhinteen oo shalay ka dhacay Degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Qatar oo xiriir wanaagsan la leh Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay kasoo horjeedo qaab walibo oo argagaxiso , waxa ayna sheegtay Qatar in ay aad uga xun tahay qaraxii dadka badan ku dhinteen ee shalay ka dhacay egmada Wanlaweyn.
Dowlada Qatar ayaa Soomaaliya U balan qaaday in dalka siinayso taageero dhinaca amaanka ah si looga hortago kooxaha argagaxisada, waxa ayna Qatar sheegtay in Soomaaliya muhiim tahay in laga caawiyo dhinaca amaanka si ay cagaheeda ugu istaagto.
Dooxa oo wakhti Xaadirkaan la leh xiriir aad uwanaagsan Muqdisho ayaa u muuqata mid wadamada kale mid ka horaysa Saaxiibtinimada iyo la shaqaynta Dowlada xilgaan ee Soomaaliya taas oo hal heeskeedu yahay Nabad iyo Nolol.
Qatar oo Soomaaliya Ka taageeraysa Dhanka Amaanka added by Staff on May 10, 2018